this u leexo safar galay mid ka mid ah waxbarashada aad u. Kids Khayrja doonaa Pool Godka, halkaas oo ay u arki karaan Qoryaale dhagax badeed iyo kalluunka qalaad. Ma isha ku carsaanyo ah? Markaas xaqiiqada ah xanxantayn doonaa, malana; Waalidiinta Tuttosport nasashada neefsan karaan fudud ee Baraakada udugga ah! score! Ha kids ku raaxaysan garoonka biyo Aqua sayrin, Monky Tonky Legeland indoor ama tag bowling inta aad nafisto baxay.
Waxaa park ugu horeysay oo ugu weyn biyo Kaapelitalo ee France, ku yaal gobolka Provence, dhow Avignon, waxay ku siin karaan raacid qoyska aad, meelaha loogu talagalay carruurta ka yar, bogagga biyo kala duwan, webiga ugu weyn ee caajis Europe iyo sidoo kale Aadan Qabille ugu weyn isticmaalo dunida oo dhan. park biyo Tani waa u furan inta lagu jiro xagaaga (ka June inay September) iyo sidoo kale waa ku haboon oo loogu talagalay dadka naafada ah.
Splashworld yaalo 17 km ka Avignon, taas oo ka dhigaysa in ay si fudud loo heli karo! Sidoo kale, soke ee ah saldhiga baska isku xira park biyaha la tareenka ee Avignon ah, waxay suuro gelineysaa kuwa safraya bas ama tareen kale goobood oo France si ay u gaaraan Splashworld si deg deg ah!
15 oo ka mid ah 17 barkadaha furan yihiin sanadka oo dhan iyo mid ka mid ah barkadaha indoor badan oo ku xiran a dabaal- dibadeed kulul ayaa sidoo kale u furan sanadka oo dhan. pool la ruxruxo iyo pool isticmaalo ka xusno jawiga of fasaxyada badda xeebteeda. pool isticmaalo waa weyn! Waxaa loo adeegsan karaa looxyo gaar ah loogu talagalay isticmaalka gudaha iyo sidoo kale guddida adiga kuu gaar ah.
Haddii aad raadinayso jimicsi qaar ka mid ah waxaa jira a 25 m (82 ft) dabaasha iyo a 3 m (10 ft) quuso. quudhin indoor The dalabyo pool 11 durko la dherer total of dhowaad 1 km (0,6 mile). slide ugu sareeya hoos aad qaadataa on masaafo xiiso ka 17 m (55 ft). Sidoo kale, waxaa jira slide balaadhan oo ilaa saddex qof dhinac iyo sidoo kale slide basal ah oo a 180 m (590 ft) Webiga buurta dheer, fadhiyo la dhagaxyada uga yaacday, haddii aad dareensan tahay adventurous.
Lake Garda laga yaabaa caan ku tahay nabadda iyo xasilloonida, laakiin Caneva World runtii ruxruxaa wax up. This double whammy of a theme park is split between a Movieland and Acquapark.
Ready in ay alaabahooda aad salsaarasho iyo tegi on a safar si aad u hesho Parks Water Best The ee Europe? danbayntii ay haa tahay! news Best weli, waxaad ka heli kartaa dhammaan meelaha kuwaas oo si fudud iyadoo la kaashanayo SaveATrain ! Iyada oo aan lahayn lacag dheeri ah oo qarsoon, aad leedahay doonaa dheeraad ah in la geliyo raacid cabsi badan iyo jeer wanaagsan! Ballansan fasax in Summer, hadda!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama riix halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-water-parks-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#summertrip #summerwaterpark #waterparks europetravel reerka summerholidays